PressReader - Kwayedza: 2018-10-05 - College Press yakapa mota
College Press yakapa mota
Kwayedza - 2018-10-05 - Nhau Dzemuno - Malven Mugadzikwa
KAMBANI ine mukurumbira mukudhinda mabhuku ekuverenga, yeCollege Press, nemusi weChipiri svondo rino yakapembedza vamwe vevatsigiri vayo nekuvapa mibairo yemotokari senzira yekupemberera kusvitsa kwayo makore 50 iri mubhizinesi.
Chikoro cheSadza Primary School chekuChikomba chakapihwa motokari yeNissan Caravan pamwe chete nelaptop kuchitiwo kambani inotengesa mabhuku yeStationary and Gifts yakawanawo mota yerudzi rweHonda Fit. Vachitaura mushure mekupa mibairo iyi, head of sales and marketing kuCollege Press, VaSamuel Ndanga, vanoti kambani yavo inokoshesa makasitoma ayo.
“Mibairo iyi ndeimwe nzira yatakapemberera nayo makore 50 tichiita zvekudhinda nekutengesa mabhuku emhando yepamusoro.
“Zvakakosha kuti sekambani, tirangarire vatinoshanda navo kuburikidza nekupa mibairo yakaita seyatapa nhasi. Ndeimwe nzira zvakare yekutenda avo vanotenga nekuvanotengesa mabhuku edu,” vanodaro.
Vanoenderera mberi vachiti, “Makwikwi azoita kuti Sadza Primary School neStationary and Gifts zvihwine akatanga munaGunyana gore rapera. Mumakwikwi aya, takanga takapatsanura kuti ezvikoro neezvitoro zvinotengesa mabhuku tichiti pakupedzisira tiwane chikoro chimwe nechitoro chimwe chete vazowana mibairo.
“Chishuviro chedu sekambani kuti zvikoro pamwe nezvitoro zvinotengesa mabhuku varambe vachititsigira,” vanodaro VaNdanga.
Mukuru weSadza Primary School, Mai Gladys Chakoma, vanotenda College Press vachiti kambani iyi yavagonera pakuvapa chekufambisa.
Izvi zvinotsigirwawo naVaSisolani Mhlope, avo vanova director kuStationary and Gifts iri kuBulawayo. Vanoti kutengesa mabhuku eCollege Press kwavaita kuti vazivane nevatengi vazhinji, kunyanya zvikoro nekuti mabhuku acho ane ruzivo rwemhando yepamusoro.
Managing director weCollege Press, Muzvare Natsai Gurupira (kurudyi), vachitambidza Mai Gladys Chakoma makiyi emota yavakapa chikoro chavo.
Managing director weCollege Press, Muzvare Natsai Gurupira vachitambidza VaSisolane Mhlope makiyi emota.